Lafta Gareen “Weerarada Al-Shabaab waa in wax laga qabto” | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Lafta Gareen “Weerarada Al-Shabaab waa in wax laga qabto”
Lafta Gareen “Weerarada Al-Shabaab waa in wax laga qabto”
Madaxeynaha Dowlad Goboleedka KGS Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen ayaa ka hadlay weerarada maalmihii lasoo dhaafay saldhigyada Ciidamada Gobolka Bay ay ku qaadayeen Al-Shabaab.
Lafta gareen ayaa sheegay in loo baahan yahay feejignaan sare oo laga sameeyo weerarada Al-Shabaab si looga hortago qorshooyinka ciiidan oo ay u dajiyeen Xeryaha Ciidamada Dowladda iyo kuwa KGS.
Si gaar ah waxa uu uga hadlay dagaaladii Al-Shabaab ku qaaday Deegaannada Daynuunay iyo Goof-guduud Buurey oo ay ku dhinteen saraakiil iyo mas’uuliyiin katirsan Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya.
“Howlgaladii cuslaa ee sugidda amniga ee waayahaan ka socday Daynuunay iyo Goof-Guduud iyo dhibaatada Degenaashiyaha Ciidanka SNA oo arrin culus noqotay mid culus waxaa loo baahan yahya in xal waara laga gaaro, waxaana rabnaa in ay dulqaad badan sameeyaan oo dalkooda iyo dadkoodu xorreeyaan” ayuu yiri Madaxweyne Lafta Gareen.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Waxa aan ballanqaadayaa sidoo kale Dowladda Federaalka ballanqaadeysaa in aan bixino xuquuqda Ciidamada ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin, dhanka ay doontaba ha jirtee, askarta waxaa iyanna looga baahan yahay in ay kasoo baxaan waajibaadkooda, una dulqaataan culeyska heysta si ay uga guuleystaan cadawga”.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka KGS Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in la dajinayo qorshe lagu hagayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab eek u kordhay waayahaan deegaannada maamulkaas gaar ahaan Gobolka Baay.
Maqaal horeDab khasaare kala duwan geystay oo ka kacay deegaanka Bacaadweyn
Maqaal XigaShacabka Dhuusamareeb oo amaro culus la dul-dhigay